यस्तो अनौठो गाउँ, जहाँका ढोका खुला भएपनि चोरी हुँदैन, चोरी गरे अन्धो भइने विश्वास ! Canada Nepal
यस्तो अनौठो गाउँ, जहाँका ढोका खुला भएपनि चोरी हुँदैन, चोरी गरे अन्धो भइने विश्वास !
काठमाडौं - विश्वमा धेरै अनौठा परम्परा भएका गाउँहरु छन् । ठाउँ अनुसार सबैका परम्परा र रहनसहन पनि फरक फरक हुन्छ । यस्तै भारतमा एक अनौठो परम्परा भएको गाउँ छ ।
जहाँको परम्परा सुनेमा अनौठो र पत्याउन मुस्किल छ । विहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा एक अनौठो परम्परा भएको गाउँ छ । जहाँका मानिसहरु घरको ढोका खुला बनबास जाने गर्छन् ।
किनकी उनीहरुलाई गाउँमा हुने चोरीमा कुनै डर छैन । त्यहाका गाउँलेले २ सय वर्षदेखि चलिआएको एक परम्परा मान्दै आएका छन् । करिब ८ सय घर भएको उक्त गाउँमा हरेक घरका एक जना हरेक बर्षमा बनबास जानुपर्दछ ।
बैशाख महिनामा हुने जानकी नवमीमा सबै गाउँले वनदेवीको पुजा गर्न जंगल जाने गर्छन् । प्राकृतिक सम्पदाको रक्षाको लागि उनीहरुले वनदेवीको पुजा गर्ने गर्छन् ।
त्यससमय गाउँमा कोही बस्न नहुने र बसेमा राम्रो नहुने विश्वास छ । त्यससमय घरहरु खुल्ला गर्ने गरिन्छ । यदि त्यससमय कसैले चोर्ने प्रयास गरेमा पनि अन्धो हुने विश्वास छ ।
भाद्र ७, २०७७ आइतवार ००:४६:५२ बजे : प्रकाशित